သီချင်းငှက်ကလေးတစ်ကောင်နှင့်……………. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » သီချင်းငှက်ကလေးတစ်ကောင်နှင့်…………….
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Aug 12, 2011 in Drama, Essays.., My Dear Diary | 12 comments
တစ်ရက် အိမ်ရှေ့မှာထိုင်နေုတန်း ဟိုးခပ်ဝေးဝေးကနေ ဖွင့်ထားတဲ့သီချင်းလေးကခပ်သဲ့သဲ့လေးပျံ့လွင့်လို့လာပါတယ်။
အလင်းရောင်လေးရေ ဘယ်ဆီမှာ မင်းလင်းလက်လို့နေလဲ အဝေးက မင်းလေးရဲ့ခေါ်သံ ခြေရာခံရင်းတွေ့တဲ့ ထိရှာမယ်”
ဒီသီချင်းလေးကိုကြားမိတော့ ကမ္ဘာမြေကို ပြန်မလာနိုင်တော့တဲ့ သီချင်းငှက်ကလေးတစ်ကောင်ကို သွားသတိရမိပါတယ်။
1985 တက္ကသိုလ်နောက်ဆုံးနှစ်အပြီး မှာတော့ ကျနော်မနှစ်သက်ပေမယ့်လဲ မိသားစုအလိုကျအောင့်အည်းလို့
ကျနော်အဖေ့ဘက်က မိသားစုအားလုံးက ကျောင်းဆရာ ဆရာမ စာရေးစာချီအစရှိတဲ့ဝန်ထမ်းမိသားစုပါ။
နေ့စဉ် မှန်မှန်ရုံးတက် ရိုးရိုးကုပ်ကုပ်နေ ရလာတဲ့ဝင်ငွေကို တစ်လစာဝေပုံချလို့သုံး၊
ဂီတကိုနှစ်သက်လို့ စာဖတ်ခြင်းကို စွဲမက်သူတစ်ယောက်။
ဆယ်တန်းအောင်စဉ်ကာလ ကျနော်တို့ခေတ်က လူငယ်များ ရဲ့အိပ်မက်ဖြစ်တဲ့
“အင်စတီကျု့” လို့ ဘိုလိုခေါ်ကြတဲ့ MC, RIT, BED,ECO အစရှိတဲ့နေရာများကို
၀င်နှိုင်ဘို့အတွက်ကလဲ မသေချာ ဒီတော့လည်းသာမန်ဝန်ထမ်းမိသားစုက ပေါက်ဖွားတဲ့လူဆိုတော့လည်း
မနက်7နာရီရောက်အောင်သွား ညနေလေးနာရီထိုးရင်ပြန် ဆိုတဲ့
အပြောင်းအလဲအတက်အကျမရှိ တဲ့ အစိုးရ စက်ရုံတစ်ခုမှာအောက်တန်းစာရေးအဖြစ်အလုပ်ဝင်လုပ်ပြီး
ဒီအလုပ်က မနက်စောစောထလို့အလုပ်သွား တစ်နေကုန်စက်ထဲမှာနေ ၊
အဲတော့ဒီအလုပ်က ကျနော့်အတွက် ဘောင်ပိတ်ပါတယ်။
အဖေ့ကို ပေးထားဘူးတဲ့ကတိအတိုင်း ဘွဲ့တစ်ခုမရ မချင်းအောင့်အီးပြီးလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။
1985 ကျောင်းပြီးတဲ့နှစ်မှာ ကျနော်သူငယ်ချင်းရဲ့ ဆက်သွယ်မူ့နဲ့ “တေးသံသွင်း”ဆိုင်တစ်ခုမှာ
အစိုးရ၀န်ထမ်းအဖြစ်ကထွက် ပုဂ္ဂလိကအလုပ်ကို ပြောင်းရွှေ့လို့လုပ်တာကို အဖေသိသွားချိန်မှာတော့
မှတ်မှတ်ရရ လေးငါးခြောက်လလောက်ထိ အဖေကကျနော့်ကို စကားမပြောခဲ့ပါဘူး။
ဒါပေမယ့်ကျနော့်အတွက်သက်သာရ ရသွားတဲ့ အကြောင်းကတော့
အရင်က လခ 185ကျပ်ကနေ အခုလက်ရှိအလုပ်က တစ်လ 300ကျပ်ဆိုတော့
အိမ်ရဲ့စားဝတ်နေရေးကို အထောက်အကူပြုပေးနိုင်တဲ့အတွက် အဖေနဲ့ကျနော့်ကြားမှာ
အိမ်ကလဲကျနော်အလုပ်ပြောင်းလုပ်တာကို စိတ်တိုင်းမကျပေမယ့် ပြောလို့မရဘူးဆိုတာသိတော့
အိမ်က ဘယ်လိုဘဲပြောပြော ဒီအလုပ်ကိုကျနော်နှစ်သက်တယ်။
အဆိုတော်ပေါင်းစုံရဲ့ သီချင်းအသစ် အသစ်တွေကလည်း နေ့စဉ်နဲ့အမျှထွက်နေတယ်။
“စိမ်းမြ သစ်ရွက်တို့ကြွေနေဆဲ ………….ငါ့မျက်ရည်စိုနေတုန်းပေါ့……….တစ်ချို့တွေနေနိုင်လွန်းတယ်”တို့
“သံဇကာအလည်မှာ တစ်ယောက်တစ်ဖက်ရှိနေဆဲ………..စကားသံတွေမသဲကွဲ တို့နှစ်ယောက်လဲ” တို့
“မလွန်ဆန်နိုင်ရင်လဲ သင်္ခါရ တရားလို့ ပြောပြပါလား မိငယ် မနှောင်းသေးတဲ့အိပ်မက်အခါတစ်ရာမက မက်စဉ် မရေရာနိုင်သေးတဲ့ဘ၀မှာ” တို့
“ချည်နှောင်ထားတဲ့ အကြင်နာနှောင်ကြိုးဟာ တို့အသည်းတွေကိုရစ်နှောင်မိ…………….”တို့
“လေပြေအလာ ကေသာလွန့်လူးလွင့်နေ လမ်းလျှောက်လို့လာရင်း ငုံ့ကာကြည့်လိုက်”တို့
“အပေါ်ဆုံးထပ်က အသဲကွဲသီချင်းကို ဆိုညည်းလိုက်တော့ နှင်းတွေဟာ ပိုမိုသိပ်သည်းလို့လာတယ်” တို့
“နုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ် ကျနော်သွားတော့မယ်………….လမ်းရဲ့သယ်ဆောင်ရာ ဟိုအဝေးကို…………အဝေးကို”တို့
“ပုလဲလေးတွေဆိုတာ ကမာကောင်လေးတွေရဲ့မျက်ရည်ဘဲခင် ဒါကြောင့်သာပင်လည်မှာ မဆွဲစမ်းပါနဲ့ခင်”တို့
“နေ၀င်ညကို ကူးဖြတ်ရဲမှ ရောင်နီသာတဲ့နေ့သစ်ကိုရောက်မယ်…….” တို့
စိတ်တွေက အချစ်နဲ့မွှမ်းထုံနေတုန်း ကာလလေးတစ်ခုမှာပေါ့။
တက္ကသိုလ်အတူတက်ဖက် ကောင်မလေးကို သူငယ်ချင်းအဖြစ်ကနေ ချစ်သူ ဆိုတဲ့
သူကလဲ ကျနော်သူ့ကိုချစ်နေတာကို သူကလဲသိ၊
“သူငယ်ချင်းလေးချစ်တယ် ဘယ်လိုပြောရမလဲ ကိုယ်ဒီလို သိပ်သိပ်ချစ်နေတယ်
ချိုမြစွာ သီဆိုတဲ့ အသံ လှပတဲ့စာသား နားဝင်ချိုတဲ့တေးသွားအလိုက်က ရင်ကိုထိရှ။
ဒီသီချင်းလေးကို ကြားမိတဲ့အချိန်ကျနော့်စိတ်တွေ မှင်သက်မိသွားပါတယ်။
ကျနော်လက်ရှိအဖြစ်အပျက်နဲ့ထပ်တူကျနေတိုက်ဆိုင်လွန်းလှ တဲ့ သီချင်းက
ကျနော့်ရင်ထဲကို စူးနစ်စွာဝင်ရောက်သွားတော့အဲဒီအဆိုတော် ဘယ်သူလဲဆိုတာကို သိချင်လို့လာပါတယ်။
မှတ်မှတ်ရရ 1987 ခုနှစ်ပါ။
ကျနော် အလုပ်လုပ်တဲ့တေးသံသွင်းက သီချင်းအသစ်ထွက်လို့ ကော်ပီကူးနေတယ်ဆိုရင်
အတော်လေးကို သဘောကျသွားတော့ နောက်တစ်ခေါက်သီချင်းထပ်ကူးချိန်မှာ
ထူးခြားတဲ့ဆိုဟန် အဆုံးသတ်မှာ အသံလေးတုန်လို့ဝဲသွားပုံက နိုင်ငံခြား “ဘီးဂျီးစ်”အဖွဲ့ရဲ့ဆိုပေါက်နဲ့တော့ဆင်ပါတယ်။
( ယုံကြည်တာတွေအားလုံး စွန့်လွှတ်ခဲ့ပါတယ် တို့အချစ်ကဆုံနိုင်ဘို့သိပ်မလွယ်)ဆိုတဲ့“ မေ့လိုက်တော့ “၊
(သူပန်ထားတဲ့ပန်းနီနီ ကျနော်နေရာခဏလဲချင်သည် ကြင်နာသူလေးလှဘို့အစွမ်းကုန် ကြိုးစားမည်)“ တစ်နေ့နေ့တော့ချစ်လာလိမ့်မယ် “
(နာရီသံတွေဆူညံလို့လွန်းနေ ရင်ခုန်သံတွေမြန်တယ်အချစ်ရေ……)“ နာရီပေါ်ကမျက်ရည်စက်များ “
“ မရိုးသားတော့ဘူး “နဲ့
(ပြောင်းလဲတတ်တဲ့မင်းကိုတို့ဘယ်လိုမှနားမလည်…….ကြင်နာတတ်သောအညိုရောင်မျက်ဝန်းများ……..)“ စိမ်းရက်လေအား “တွေဖြစ်ပါတယ်။
“ ပေါက်ပေါက် “နဲ့စုံတွဲဆိုထားကြတဲ့ “ ဝေးသွားတဲ့အခါ “သီချင်းဘဲဖြစ်ပါတယ်။
(ဝေးသွားတဲ့အခါ နှလုံးသားမှာ အမြဲတမ်းသတိရနော် ကြင်နာခဲ့ဘူးတဲ့ အချိန်ခါများ ပြန်လည်ရယူဘို့………………..”
ဆိုတဲ့စကားလေးများကို အသံအနိမ့်အမြင့်အတက်အကျနဲ့ပြိုင်တူဆိုသွား တာရင်ထဲမှာငြိလို့သွားပါတော့တယ်၊။
လိုက်ပေးတဲ့ ရင်းကီး ဆိုသူရဲ့ ဟာ………ဟာ……….ဟာ……..ဆိုတဲ့အော်သံလေးကို သဘောကျမိဘူးပါတယ်။)
သံစဉ်က ဂျတ်စ်ဂီတ နိုင်ငံခြားသံစဉ်နဲ့ဆင်တူပေမယ့် ဆိုထားပုံက အင်မတန်မှကိုလှပသေသပ်တဲ့သီချင်းလေးတပုဒ်ဖြစ်နေပါတယ်။
ဒါကတော့ ကျနော်နဲ့ငှက်ကလေးရဲ့ ကနဦးတွေ့ဆုံမူ့လေးပေါ့။
အဲဒီအချိန်တုံးကတော့ ကက်ဆက်ခွေနဲ့ သီချင်းတွေမောင်းနှင်အားကောင်းနေတဲ့အချိန်လေးပါ။
နောက်အဲဒီတုံးက သီချင်းတစ်ခွေဖြန့်တယ်ဆိုရင် ကာဗာကဒ်ကိုရောင်းစားတဲ့ခေတ်ပါ။
လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက် ပလာတာတစ်ခု တစ်ကျပ်။
သီချင်းတစ်ခွေလက်ရွေးစဉ်ကူးရင် 30ကျပ်၊စီးရီးလိုက်ကူးရင် 15ကျပ်ခေတ်ပေါ့။
ကြုံလို့ပြောရင် သီချင်းခွေတစ်ခွေမှာ မူရင်းကာဗာကဒ်တစ်ခုထည့်လို့ရောင်းပါတယ်။
သီချင်းတစ်ခွေဖြန့်တယ်ဆိုရင်သီချင်းခွေပိုင်ရှင်က တေးသံသွင်းဆိုင်တွေကို မူရင်းတိတ်ခွေ(ရီကော်ဒါတိတ်ခွေကြီးတစ်ခွေ)ပေးပြီး ကော်ပီကူးခိုင်းပါတယ်။
မကူးချင်ဘူးဆိုလဲ ကူးပြီးသား အခွေကို ဈေးနူန်းသင့်လို့ရောင်းပေးပါတယ်။
နောက် တေးသံသွင်းဆိုင်တွေကို ကာဗာကဒ်လို့ခေါ်တဲ့
သီချင်းနာမည် တို့ ခွင့်ပြုမိန့်တို့ အဆိုတော်ရဲ့ဓါတ်ပုံတို့ ပန်းချီဒီဇိုင်းတွေပါတဲ့စာရွက်လေးကို
နာမယ်ကြီးအဆိုတော်ဆိုရင် အရွက်200တို့300တို့သတ်မှတ်ထားတာကို တစ်ရွက်ငါးကျပ်နဲ့ အပြတ်ဝယ်။
နာမယ်မကြီးသေးတဲ့အဆိုတော်ဆိုရင် ကဒ်အရှင်စနစ်နဲ့ထား ပြီးမှကုန်သလောက်ရှင်းဆိုတဲ့စနစ်နဲ့ဖြန့်ကြပါတယ်။
အဲတော့ပုံကလဲမလှ အသံကလဲမကောင်း ရောင်းဈေးခြင်းကလဲသိပ်မကွာတော့
လူတိုင်းက မူရင်းခွေကိုသာဝယ်တယ်၊ အိမ်က ကက်ဆက်ခွေအဟောင်းကိုဖျက်လို့ပြန်ကူးချင်ကူးမယ်
ဒီတော့လဲအဲဒီတုန်းက သီချင်းခွေတစ်ခွေထွက်မယ်ဆိုရင် ကာဗာကဒ်တို့
ဒါပေမယ့် ဒီငှက်ကလေးရဲ့ကာဗာကဒ်ပုံကတော့ အမှောင်များတဲ့အရောင်တွေနဲ့ မပီမသ ဂစ်တာတစ်လက်နဲ့
ကိုယ်တစ်ပိုင်းပုံ မသဲမကွဲ နဲ့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။
အဆိုတော်အသစ်များရဲ့ထုံးစံအတိုင်း စ စချင်းသိပ်မရောင်းရပါဘူး။
နောက်သူ့နာမည်ကလဲ အခေါ်ရခက် ၊
စာလုံးတစ်လုံးချင်းကလဲ အဓိပ္ပါယ် ဆက်စပ်လို့မရ။
အဲတော့ဝယ်ချင်ရင်တောင်မှ နာမယ်ပြောရမလွယ်တော့ ခက်ပြန်ရော။
ဒါပေမယ့် ပတ္တမြားမှန်ရင်နွံမနစ်ဘူးဆိုတဲ့စကားက တကယ်ကိုမှန်ကန်တဲ့စကားပါ။
အဲဒီအခွေထဲက သီချင်းလေးတွေ အထူးသဖြင့်
(တစ်နေ့နေ့တော့ချစ်လာလ်ိမ့်မည်တို့ မရိုးသားတော့ဘူးတို့ ဝေးသွားတဲ့အခါတို့မေ့လိုက်တော့တို့ နာရီရဲ့သီချင်းတို့)
ရက်စက်စွာပြုံးတတ်သော တို့ သီချင်းလေးသက်သေ ဆိုတဲ့သီချင်းလေးတွေကို လက်ရွေးစဉ်လာကူးကြတဲ့ခွေတွေထဲမှာတွေ့လာရပါတယ်။
တစ်စ တစ်စနဲ့ငှက်ကလေးသီချင်းတွေကို ကြိုက်သူ နှစ်သက်သူများလာပါတယ်။
အဆိုကောင်းရုံတင်မကဘူး ကိုယ်တိုင်လဲရေး တူရိယာပစ္စည်းမျိုးစုံကိုလဲ တီးတတ်တယ်
အသံတွေကို လဲ ကိုယ်တိုင်ခွဲနိုင်တယ်ဆိုတော့ ကြိုက်လဲကြိုက်လေးလဲလေးစားပေါ့နော်။
ဒါပေမယ့် ငှက်ကလေးရဲ့ခွေထဲမှာတော့ မှော်ဆရာအိပ်မက်ဆိုတဲ့သီချင်းမပါ ပါဘူး ။
အဲဒီအခွေထဲမှာအကောင်းဆုံးလို့ဆိုရမယ့် သီချင်းရင်ထဲကို ထိသွားတဲ့သီချင်းကတော့
ငှက်ကလေးကတော့ rock သီချင်းအသွက်တွေ အော်ရတဲ့သီချင်းတွေကို နှစ်သက်ပုံရပါတယ်။
ကျနော်ကတော့ သူ့သီချင်း ဆိုရင် အေးအေးဆွေးဆွေးလေးတွေကိုဘဲကြိုက်သလို သူနဲ့ပိုလိုက်တယ်လို့ခံစားရပါတယ်။
“ညို့တတ်တဲ့သူ့အကြည့်က လွန်မြောက်အောင်ရုန်းထွက်ဘို့သိပ်ကိုခက်” ဆိုတဲ့ “အချစ်ဆုံးလို့”သီချင်းက
ခပ်လည်လည်ကောင်မလေးနဲ့ညိနေတဲ့ သူငယ်ချင်းကို ကျနော်တို့အဖွဲ့က စောင်းမြောင်းလို့ ဆိုခဲ့ရတဲ့သီချင်းလေးပေါ့။
ကျနော်ကိုယ်တိုင်အတွက်ကလဲ ကျနော်ချစ်ရတဲ့သူငယ်ချင်းလေးက ကျနော့်ကိုချန်ထားခဲ့တဲ့အချိန်……………….
တစ်ချိန်မှာ သူနဲ့လက်တွဲဖြစ်ရင် ဆိုတဲ့စိတ်ကူးတွေ အတွေးတွေနဲ့ ပျော်ခဲ့ဘူးတဲ့ကျနော်……………………….
“ မျှော်လင့်ချက်သာမထားခဲ့ရင် ငါဒီလိုခံစားရမယ်မထင်ဘူး……………..
မျှော်လင့်ချက်သာမထားခဲ့ရင် ငါဒီလိုငိုကြွေးရမယ်မထင်ဘူး” ဆိုတဲ့သီချင်းလေးကိုနောင်တတွေတစ်ပွေ့ကြီးနဲ့
ညည်းနေရင်းက “တိတ်တိတ်မျက်ရည်ဝဲ ကြေကွဲသွားရုံလေး………………..”ဆိုပြီးခံစားခဲ့ရဘူးပါတယ်။
ဒီမှော်ဆရာအိပ်မက်ခွေကတော့ ငှက်ကလေးကို အရောင်တင်ပေးလိုက်တဲ့သီချင်းတွေများပါတယ်။
“အမေ့အိမ်”သီချင်းကတော့ လူတိုင်းရင်ထဲကို အနက်ရှိုင်းဆုံးထိထိုးဖောက်သွားတဲ့သီချင်းလို့ပြောရင်ရပါတယ်။
(1991ကျနော် တေးသံသွင်းလုပ်ငန်းကနေ ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုပြောင်းပြီးအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ညည ကိုးနာရီ ဆယ်နာရီလောက်ထိ အလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါများမှာ ကျနော့်ကိုမြင်တာနဲ့ အလုပ်ထဲက ကလေးတွေက
ငှက်ကလေးလို နွေးထွေးတဲ့ အမေ့အိမ်မရှိတဲ့ သင်းကွဲငှက်တစ်ကောင်လို ဖြစ်နေတဲ့ ကျနော့်အဖို့ မျက်ရည်ဝဲရုံကလွဲလို့…………..။)
1989ခုနှစ်မှာတော့ လူမုန်းရေးပြီး အောင်ကိုလတ်ဆိုခဲ့တဲ့ “ခေါင်းလောင်းလေးတွေမြည်နေပြီ”သီချင်းပါတဲ့
သီချင်းချစ်သူတွေကြားမှာအငြင်းပွားစရာ “တနေ့နေ့တော့ ချစ်လာလိမ့်မည်”ဆိုတဲ့သီချင်းနဲ့ “ခေါင်းလောင်းလေးတွေမြည်နေပြီ”က
သီချင်းတေးသွားအလိုက်တွေက အချို့နေရာလေးတွေမှာ အတော်လေးတူနေတာပါဘဲ။
ဒီသက်ငြိမ်မှာတော့ “ချစ်တိုင်းလဲမညား “။့ “ နှလုံးသားရဲ့ကျမ်းစာ “။“ ကလေးရေ “။့ “ ကာရံမညီသော “သီချင်းတွေက
ပေါက်သွားတဲ့သီချင်းတွေလို့ပြောနိုင်သလို ငှက်ကလေးကို ဂီတလောကမှာခိုင်သထက်ခိုင်အောင်
အဲဒီအချိန်မတိုင်ခင်လေးမှာ ကျနော်ငယ်သူငယ်ချင်းလေးကလဲ မိဘသဘောတူသူနဲ့အိမ်ထောင်ကျသွားပါတယ်။
အယူအဆမတူ အမူအကျင့်မတူ အသိုင်းအ၀ိုင်းမတူတဲ့ နေရာကလာတဲ့လူနှစ်ယောက်ဘယ်လောက်ဘဲချစ်ချစ်
ဘ၀ တစ်ခုထူထောင်ဘို့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ပါ။
ဒီတော့လဲ “ချစ်တိုင်းမညား”ဆိုတဲ့သီချင်းလေးကို နားထောင်ရတာကျနော့်အတွက်တော့ ပိုပိုပြီး ခံစားရသလိုပါဘဲ။
1990 ကျနော်လဲ တေးသံသွင်းလောက ကနေ အပြင်လောကကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။
အဲတော့လဲ ဂီတလောကနဲ့နည်းနည်းတော့ အဆက်အသွယ်ပြတ်ပြီး ဘာခွေတွေထွက်လို့ထွက်မှန်းမသိဖြစ်သွားပါတယ်။
တစ်ရက် ကျနော်အလုပ်လုပ်နေတဲ့နေရာကို သီချင်းလောကထဲမှာကျင်လည်စဉ်က
“ လရောင်ထဲ ကိုယ်လမ်းလျှောက်ချင်တယ် ဘယ်ကိုရောက်နေလဲ မစဉ်းစားဘူးကွယ်……”
“ နေ၀င်ပြီဆိုရင်ကိုယ်လေငိုချင်တယ် ရင်မှာနာကျင်စွာဆွေးတယ် အဆောင်မှာမှောင်ရီဝိုးတ၀ါးနဲ့…………”
“ပန်းပွင့်တွေလှမ်းလင့် ခြွေသံလား ပြူတင်းတံခါးမှာနှင်းများလာရိုက်ခတ် လအရိပ်မှာ ညအိပ်ယာဝင်ဆဲ………အို့ အို့ တစ်ဆောင်းသစ်ပြန်ပြီ ”
“ ဒီမြေမှာ တို့ရဲ့သွေးတွေဖြတ်သန်းရင်းနဲ့စီးဆင်း သူဟာရာဇ၀င်များရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တို့သိမ်းဆည်းထား……….ဧရာဝတီ”
ဆိုတဲ့သီချင်းလေးတွေအပြင် ဟိုးအရင်က အောင်ရင်သီဆိုခဲ့ဘူးလို့ကြားဘူးနေတဲ့
“ မင်းမရှိရင် အသက်မရှင်ချင်ဘူးအချစ်ရယ်”တို့
“ ကိုယ်သိပ်ချစ်မှန်းသိရဲ့နဲ့မင်းမုန်းခဲ့ ဒါဘာကြောင့်မှန်းတွေးမရပါလား…”
“အမေ ကျနော့်ကိုစိတ်မပျက်ဘူးလား ကျနော်ဟာကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့သီချင်းလေးတပုဒ်ပေ့ါ”
“ခုတော့ဝေးကြပြီ ဒို့နှစ်ဦးသား နုတ်ဆက်မျက်ရည်လေးများအားလုံးမသိအောင်သိမ်းထား အခါလွန်တဲ့မိုးမို့ အငြိုးနဲ့ရွာ ”တို့
၀ယ်လိုက်ပါလားလို့ပြောတော့ သူလဲ ကြိုက်တယ်
ဒါပေမယ့် သူလက်ထဲရှိတဲ့ပိုက်ဆံက ငါးသိန်းမပြည့်တော့ သုံးသိန်းခွဲနဲ့တော့ဆစ်ထားတယ်
နောက်သူနဲ့ထပ်တွေ့တော့ မယူဖြစ်ဘူး သူများယူသွားတယ်ပြောပါတယ်။
1991 ရဲ့ဘိုလို့ နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့မှာ
ရောင်းလိုက်ရတာ မတိတ်ဘဲရွာနေတဲ့မိုးလိုဘဲ တစိမ့်စိမ့်……………….။
သူ့အစား ကျနော်တောင်ကြားထဲက ၀င်နှမျောလိုက်မိပါသေးတယ်။
ငှက်ကလေးက သူ့ကို ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်သီချင်းတွေဘဲ ဆိုတတ်တယ်လို့ထင်မှာစိုးတယ်ထင်ပါရဲ့။
“ အရင်အတိုင်း“ဆိုတဲ့ခွေလေး 1991 နှစ်ကုန်ခါနီးလေးမှာထွက်လာပါတယ်။
“ရွှေ” ၊“အရင်အတိုင်း” ၊“တကယ်ဆိုရင်” ၊“ဒုက္ခမြစ်များ”၊“အချစ်အကြောင်း”
အားလုံးထဲမှာ ကျနော့်ရင်ကို ညိ ဟတ်ကိုထိတဲ့သီချင်းကတော့
“နေမင်းလေးလို ဘ၀မှာလင်းလက်သူ………မင်းဟာငါစိတ်ကူးယဉ်အလှဆုံးပန်းပါ အိပ်မက်တွေတကယ်ဖြစ်သွား”
ဆိုတဲ့ ဗင့်ဆင်ဗင်ဂိုးတမ်းချင်းသီချင်းကတော့ ကဗျာတွေစာတွေမှာ နိုင်ငံခြားကလူတွေရဲ့နာမယ်ထည့်ရေးရင်မကြိုက်တတ်
တဲ့ကျနော်တောင် ဒီသီချင်းကို အတော်လေးနှစ်သက်ပါတယ်။
နောက်တော့လဲ “ဘာယူမှာလဲ ဘယ်လောက်ယူမှာလဲ ဘယ်တော့ပိုက်ဆံပေးမှာလဲ”ဆိုတဲ့
စကားတွေကိုသာ မနက်မိုးလင်းက မိုးချုပ်ပြောနေရတဲ့ကျနော့်အဖို့ သီချင်းခံစားချိန်ဆိုတာ
ဘ၀ကို တည့်မတ်အောင် ကြိုးစားနေရတဲ့အခိုက်အတန့်များမှာတော့ သီချင်းတွေနဲ့ဝေး
အလုပ်ကနေ ပြန်အလာ ထီတွန်းလှည်းလေးပေါ်ကနေ
“ပြန်လာပါ အိမ်မက်လေးရေ ဒီအချိန်…………………………
အလွမ်းရဲ့မီးလျှံများ” ဆိုတဲ့အင်မတန်မှလွမ်းစရာကောင်းတဲ့အသံလေးကို ကြားမိတဲ့အခါမှာ
ငှက်ကလေးကို မေ့ထားမိခဲ့တာ ကိုယ့်ကို ကိုယ်အပြစ်တွေတင်မိပါတယ်။
သူဆိုပြမှဘဲ လောကကြီးမှာ မေတ္တာတရားဆိုတာ “စကားလုံးမရှိတဲ့ကောင်းကင်”
“ဘာယူမှာလဲ ဘယ်လောက်ယူမှာလဲ ဘယ်တော့ပိုက်ဆံပေးမှာလဲ”ဆိုတဲ့ဝဲသြဃထဲမှာ
ကျနော်ကသာ ငှက်ကလေးကိုမေ့လျော့နေပေမယ့် သူကတော့ သူလမ်းကိုသူမှန်မှန်လေးဆက်လျှောက်လို့နေစမြဲပါ။
အမေသီချင်းတွေကို ချည်းဘဲစုစည်းလို့သီဆိုထားတဲ့အထဲမှာ ပြန်လည်ဆန်းသစ်ထားတဲ့ချစ်စရာကောင်းလှတဲ့
သွားလေသူတစ်ယောက်ရဲ့ “မွေးမြေအရပ်ကို လော်ကယ်ရထားဆိုက်ရောက်ချိန်…………………..”ဆိုတဲ့
အသက်အရွယ်တွေရလာမှာ အမေ့ကျေးဇူးတွေကိုသိတတ်လာလို့ ကျေးဇူးပါမေမေလို့ ဆိုတဲ့သား၊
“မေမေရေ မငိုနဲ့နော်လေ …….ရှိခိုးဦးချကန့်တော့လျက်ပါအမေ……….”တို့
(ငှက်ကလေး ကမ္ဘာမြေကို စွန့်ခွာသွားချိန် ပြန်လည် ချေပခွင့် မရှိချိန်မှာမှ ဒီသီချင်းကိုဝေဖန်သူ တစ်ယောက်ထွက်လာခဲ့။
ကျနော်လူငယ်ဘ၀က စလို့ နှစ်သက်ခဲ့ရတဲ့ငှက်ကလေးနဲ့ကျနော်ကတော့
ဘ၀မှာ လားရာမတူ ၀မ်းစာရှာပုံတွေ မတူဘူးဆို တော့လည်း ပူးတုံခွာတုံ။
သက်ငြိမ်ဓါတ်ပုံ နဲ့ လှုပ်ယှားနေတဲ့ပုံရိပ်ယောင်တွေကိုသာ သူ့ကိုမြင်ဘူးပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ကျနော့်နှလုံးသားထဲ ဦးနှောက်ထဲကတော့သူ့ကို ရင်းနှီးနေတာကတော့အမှန်။
တကယ်ဆန်းစစ်တော့ကျနော်နှစ်သက်တာကတော့ သူ့အနုပညာ ကိုပါ။
ကျနော်သူရေးဖွဲ့တဲ့ စကားလုံးလေးတွေကို သဘောကျတယ်။
သူ့ဖန်တီးတဲ့ အသံတွေ သံစဉ်တွေကို နှစ်ခြိုက်တယ်။
(အနုပညာကို ငွေဆိုတဲ့ဘုရားအတွက် ပျော်တော်ဆက်ဘို့ရာ
မဖြစ်စေလိုပါ အို……..သူတောင်းစားသာသာလူတွေစွန့်ကျဲသမျှ မျှော်နေရမယ့်ဘ၀……………”
လို့“နောက်ဆုံးသီချင်း” ကိုနာကျည်းစွာနဲ့ ရေရွတ်ရင်း ကြယ်တွေစုံတဲ့ညမှာ ကမ္ဘာမြေကို နုတ်ဆက်လို့သွားခဲ့တာ
ဒါပေမယ့်လည်း မမေ့နိုင်သူများအဘို့တော့ လောကကြီးရဲ့တစ်ဒေါင့်တစ်နေရာမှာသူရှိနေသေးသလို…………………
နောင်ဖြစ်လေရာဘ၀အဆက်ဆက် လွဲပြီးရင်းလွဲနေတဲ့ ဘ၀မှာ တွယ်ညိတဲ့ တပ်မက်ခြင်းကို
(10-8-2011)နေ့ထုတ် SHADE ဂျာနယ် အတွဲ(5) အမှတ်စဉ်(36)မှာပုံနှိပ်ဖော်ပြပြီးဖြစ်ပါတယ်။
”အစိမ်းရောင်နေ့စွဲများ” ထဲကသီချင်းတွေလည်း မိုက်တယ်နော်။
ထူးအိမ်သင်ဆိုတာ ဂီတလောကမှာ ကြယ်တစ်ပွင့်ပါပဲ။ ဟောလီဝုဒ်လိုများ ကြယ်ပွင့်တွေပေးရင် သူလည်း တစ်ပွင့်ရလောက်ပါရဲ့။
ကိုငှက်ကြီးကိုသတိရပါတယ်။သူ့ ကိုချစ်တဲ့သူချစ်တဲ့ ပရိသတ်ကိုခွဲခွာသွားခဲ့ရခြင်းအပေါ်နားလည်မျှော်လင့်ပါတယ်။သူ့ လိုနောက်တယောက်ပေါ်မလာနိုင်တော့ပါဘူး
အဲဒိ ငှက်ကလေးက ကောင်းကင်ထက်မှာတောင် မြစ်တစ်စင်း စီးဆင်းစေခဲ့သူပေပဲ…။ သူဟာ တစ်ကယ်လို့ ငှက်တစ်ကောင်ဆိုရင် …မီးတောက်ကြားမှာ ပြန်ရှင်သန်နိုင်တဲ့ ဖိုးနစ် ငှက်တစ်ကောင်ပါ…။ သူဟာဘယ်တော့မှ ပျောက်ကွယ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်………….
ဖတ်လို့ ကောင်းလိုက်တာ။ အမေ့အိမ်သီချင်းတော့ အကြိုက်ဆုံးပါပဲ။ ဘယ်တော့မှ ရိုးသွားမှာ မဟုတ်တဲ့ သီချင်းပါ။
ဒီနေ့ထိတော့ ကိုငှက်ကြီးနေရာမှာ အစားထိုးနိုင်လောက်တဲ့ သူကိုမတွေ့သေးပါဘူး သူ့သီချင်းတွေ နားထောင်မိတဲ့ အခါဆို ရင်ထဲမှာ အမျိုးအမည်မသိတဲ့ဝေဒနာတမျိုးကိုခံစားရတယ့်
ကျမတို့အကြောင်းတွေကို လူသိရှင်ကြားထုတ်ပြောလို့ ရှင့်ကိုကျမမုန်းဒယ်……….
(အခုပဲ ကျနော့်ဆီကို အမည်မသိ အီးမေးလ်တစောင် မန်းလေးသာဦးပေါက်အတွက် တဆင့်ပေးစာဆိုပြီး ရောက်လာလို့ ဘာမှန်းညာမှန်းမသိဘဲနဲ့ (ဦးပေါက်ကို ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမှန်းလည်း မသိလို့) မှတ်ချက်ကနေ ပေးပို့လိုက်ရပါသည် ဦးပေါက်ခင်ဗျား…။
အဲတော့ သူ့ကို ဖြေသိမ့်ဘို့ကြောင်ကြီးကိုတာဝနလွှဲပေးလိုက်မယ်နော်
ကျွန်တော် ၃ တန်း လောက် မှာ
တစ္ဆေအနမ်း ဆိုတဲ့ ကက်ဆက်ခွေ လေး စထွက်တယ်ဗျ
အဲဒီ က စလို့ 
ထူးအိမ်သင် ဆိုရင် ထွက်သမျှ ဝယ်နားထောင်ခဲ့တယ်
အစားထိုးဖို့ ရန် လုံးဝ မဖြစ်နိုင်တဲ့
gifted တစ်ယောက် ပါပဲ ဗျာ
သူ့ အနုပညာ တွေ ကို အရမ်းလွမ်းတယ်
“အနုပညာကို ငွေဆိုတဲ့ဘုရားအတွက် ပျော်တော်ဆက်ဘို့ရာ
တကယ်လေးစားဖို့ကောင်းတဲ့ အနုပညာမြတ်နိုးသူစစ်စစ် တစ်ယောက်ကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာ ခုထိ နှမျောမိလျက်ပါ။ တကယ်တော့ လှပမြတ်နိုးဖွယ်ကောင်းတဲ့ သီချင်းလေးတွေကို ဖန်တီးခဲ့သူ သူကိုယ်တိုင်က ကမ္ဘာမြေကြီးအတွက် သီချင်းလေး တစ်ပုဒ်ပါ။